ဘ၀ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာဖွင့်ဆိုပြောဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်..တကယ့်ကို
လေးနက်ပြီး ဖေါ်ပြမကုန်နိုင်အောင်တွင်ကျယ်တယ်ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားလေ သိလာလေပါပဲ။
ကျယ်ပြန့်မှု့ အတိုင်းအတာကတော့ အတော်လေး များပါတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ ထမင်းငတ်လို မသေဘူးဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားရှိခဲ့ပေမယ့် တောင်းစားနေရတဲ့ သူတွေအခုလိုမျိုးဘိုးဘွာရိပ်သာမှာ အေးအေးသက်သာ နေရမယ့်
အရွယ်တွေ လမ်းပေါ်မှာ တောင်းရမ်းစားသောက်နေတာတွေ တွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ဘ၀ကံပေးလို့ အိုစတာကောင်းတဲ့သူတွေကျတော့လည်း သုံးမဲ့သူမရှိလို့ကို အတော့်လေးအဆင်ပြေကြရပါတယ်။
ဒီသတင်းလေးဆို အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ သတင်းလေးပါ။ အတော့ကို လူမဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရသော အဘွားအိုမှ ''အိမ်မှာကတည်းက အဘွားရဲ့ သားမက်က အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားဖို့၊ မဆင်းရင် မြစ်ထဲပစ်ချမယ်လို့ပြောလို့ အဘွားက ငါက ရေကြောက်ပါတယ်။ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သိပ်မကြာခင်မှာ သားမက်နဲ့သမီးက အပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ ကားတစ်စီးပေါ် ခေါ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားဝင်းတစ်ခုထဲလည်းရောက်ရော သမီးဖြစ်သူက အဘွားကိုဒီမှာ ဘုရားရှိခိုးပြီး ဥပုသ်စောင့်ဆိုပြီးတော့ ထားသွားခဲ့တာပါ။ အခုအဘွားမှာ သား သမီးလည်း မရှိတော့ဘူး။ နေဖို့လည်း မရှိတော့ဘူး'' ဟု စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရသည့် အဘွားအိုက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါအဘွားအိုမှာ ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြောင်းသိရှိရပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ထန်းတပင်မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီး အဆင်ပြေခဲ့မှုမရှိပါက နောက်ဆုံးအဆင့် အနေဖြင့် ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အိုးဘိုရပ်ကွက်မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးဝေလင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Source ; www.news-eleven.comကဖေါ်ပြတဲ့ သတင်းတစ်ခုပါ။
ဘ၀ကံပါရမီဆိုးတွေ ပါလာတဲ့သူတွေကြတော့လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးရုံတင်မက သားသမီးဆွေမျိုးတွေပြစ်ဖယ်ခြင်းတွေခံကြရတာကာလည်း သူတို့ ပါရမီကံက ပါလာရင်ဘယ်သူမှ ရှောင်ပြေးလို့မလွတ်ပြန်ပါဘူး။
ဘ၀ ဆိုတာ ဘ နဲ့ ၀ နှစ်လုံးတည်းဆိုပေမယ့် အရမ်းကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းလှတယ် ဆိုတာအောက်ကပုံလေးတွေကြည့်ပြီး သုံးသတ်နိုင်ပါပြီ။
ဒီလိုပဲ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ ခွက်ကလေးရှေ့ချလို့ တောင်းစားနေကြတဲ့သူတွေဟာ
ထုနဲ့ဒေး တွေ့နေရပါတယ်.။တချို့က အရွယ်ရှိလျှက် တောင်းစားသူတွေလည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ခြေလက်အင်္ဂါစုံစုံလင်လင်ရှိပါလျှက် တောင်းစားနေကြတဲ့ သူတွေကိုလှူတန်းပေးကမ်းဖို့ကြပြန်တော့ ပေးမဲ့
ကားလမ်းမကြီးမှာ ကားတွေသို့တစ်ဟို သွားနေတဲ့ကြားက မိုးရွာနေပူမရှောင် ရင်ခွင်ပိတ်ကလေးငယ်လေးတွေ ကို ပွေ့ချီပြီးတောင်းစားနေတဲ့သားအမိလို သူတွေတွေ့ပြန်ရင်လည်း ကလေးအမေကို စိတ်တိုမိပြီး ကလေးကိုသနားလို့ပေးမိပြန်ရော..
တချို့သူတွေပြောပြလို့ကြားရတာပါ...တချို့သော အမေတွေက ကလေးတွေမွေးပြီးကလေးလေးကိုနေ့စားနဲ့ငှားရမ်းစားသောက်ဖို့ အငှားလိုက်တယ်တဲ့..ဒါမျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးလားဆိုတဲ့ အတွေးက အဲလိုအမေမျိုးတွေကို အပြစ်ဖို့မိပြန်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ်ဟာ အလှူအတန်း မွေ့လျော်သူ တစ်ဦးဖြစ်နေမယ်.ဘယ်အရာတွေကို မျှော်လင့်ပြီးလှူဒါန်းလေ့ရှိသလဲ?
ဒီကုသိုလ်က နောင်ဘဝများမှာ မိမိထံရောင်ပြန်ဟပ်စေကြောင်း မျှော်လင့်လှူတန်းခဲ့သလား?
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ကို Generosity မြင့်သူ တစ်ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်စေလိုပြီးလှူတန်းနေသလား?
ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေက (ကမကထပြု၍ အလှူခံသူ) ငြိုငြင်မည်စိုးလို့ လှူနေမိသလား?
အလှူပစ္စည်းများကို အလိုအပ်ဆုံးသောသူများထံသို့ ရောက်ရှိအသုံးချစေတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ တစ်ခုတည်းကြောင့်ရယ်ပဲလား ?
ဒါဆိုရင် တစ်မူးစ တစ်ပဲစအလှူပင်ဖြစ်နေပါစေ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှူတန်းကြရင်ကောင်းမလဲ
စိတ်သဘောဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ပဲ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပေးကမ်းကြရမှာပါပဲမဟုတ်လား။
လမ်းဘေးမှာ မိဘတွေစွန့်ပစ်ခံနေရတဲ့ ကလေးလေးတွေ အတွက်လည်း တကယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘမဲ့တောင်းစားနေရတဲ့ ကလေးလေးတွေကို မြန်မာမှာ ရှိတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာ ကလေးကျောင်းတွေကို လိုက်စုံစမ်းရင်း ပို့ပေးသင့်ပါတယ်....အလှူဆိုတာ ပိတ်ဆံသိန်းသန်းရာနဲ့ချီပြီး လှူမှ မြတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး..ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ခြေလက်လုပ်အားကုသိုလ်လေးနဲ့ လှူတတ်ရင်မြတ်တာပါပဲ။ ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူပြီး ညောင်စေ့လောက်ပဲရတဲ့အလှူမျိုးရှိသလို ညောင်
စေ့လောက်ပဲလှူပေမဲ့ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရသွားတဲ့ အလှူတွေရှိတယ်ဆိုတာ ဘုန်းဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းနာယူကြဖူးကြမှာပါ။
စံနမူနာအနေနဲ့ပြရရင် မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်လူသားခြင်းစာနာလို့ အလှူအတန်းရက်ရော သနားကြင်နာတတ်သလို ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အန်ဂျနာဂျိုလီရဲ့ ချီးကျူးစရာသတင်းလေးပါ ကူးယူဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ (၁၂)ရက်နေ့က ကမ္ဘာကျော် ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီး အန်ဂျလီနာဂျိုလီဟာ ကင်ညာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဆိုမာလီလူမျိုး ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၃၄)နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အော်စကာဆုရှင် မင်းသမီးဟာ အာဖရိကကို ရောက်နေတုန်း ဆိုမာလီနဲ့ ကင်ညာနယ်စပ်က ဒါဒက်ဘ်ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။
အဲဒီစခန်းဟာ စပြီးတည်တုန်းက လူ(၉၀၀၀၀)ကျော်အတွက် ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် ခုဆိုရင် ဆိုမာလီ ဒုက္ခသည် (၂၈၅၀၀၀)ျေက်ာအထိ လက်ခံထားပါတယ်။ အဲဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရပ်မြေကိုစွန့်ပြီး ကင်ညာတောင်ပိုင်းထိ ထွက်ပြေးလာခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အဆင့်မြင့်ကော်မရှင်၊ ဒုက္ခသည် အေဂျင်စီရဲ့ သံတမန်ရာထူးကို (၂၀၀၁)ခုနှစ်ကတည်းက လက်ခံထားတဲ့ ဂျိုလီဟာ ခုလိုမျိုး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို မကြာခဏ သွားလေ့ရှိပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံအားပေးတတ်တဲ့သူပါ။ ဂျိုလီဟာ ဒီရာထူးကို လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်း ဘော်လ်ကန်၊ ဆီရာလီယွန်၊ နမီးဘီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်း၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အီကွေဒေါက ဒုက္ခသည် စခန်းတွေဆီ အရောက်သွားပြီးခဲ့ပါပြီ။ “သူတို့ရဲ့ နေထိုင်ရတဲ့ဘ၀တွေကို မြင်တော့မှ ကျွန်မတို့ဟာ အရမ်းကောင်းတဲ့ လူ့ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေရမှန်း နားလည်မိပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးကြားမှာ ရုန်းကန်နေရပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျကြဘူး။ ဒါဟာ လူသားစွမ်းရည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အင်အားကို ပြနေတာပါပဲ။
ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ လူတွေတော်တော်များများ အလုပ်လုပ်နေကြပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရိုင်းပင်းကြ၊ ကူညီနေကြပါတယ်။ သူတို့ကိုမြင်တော့ ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့ ကျွန်မရဲ့အမြင်ကပါ ပြောင်းလဲသွားခ့တယ်။ တကယ်တော့ လူသားချင်း မြတ်နိုးချစ်ခင်မှုကသာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အလှပဆုံး ဖြစ်စေမယ်လို့ ကျွန်မသဘောပေါက်ပါပြီ”လို့ ဂျိုလီက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ခုခရီးစဉ် အပြီးမှာတော့ ဂျိုလီဟာ ချစ်သူဘရတ်ပစ်တ်နဲ့ မိသားစုရှိနေတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ပြန်သွားတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေနဲ့ ခုလိုငယ်ရွှယ်နုပျိုစဉ် ကူညီနိုင်သမျှဘ၀ကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင် လုပ်ကြမလဲ တောင်းစားနေတဲ့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ဘ၀အခြေတည်တန့်အောင် ကိုယ် ဘာတွေလုပ်ထားသင့်လဲ ဆိုတာပဲ စဉ်းစားရတော့မယ်။။
အပန်းမကြီးတဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မူ့မျိုးလည်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။အသက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေကို
ဘိုးဖွားရိပ်သာ လိပ်စာလေးကို ဖုန်းဆက် ရှာဖွေစုံစမ်းပြီးလည်း ဘိုးဖွားရိပ်သာတွေကိုပို့ပေးသင့်ပါတယ်..
အားကိုးရာအစစ်ကို ရှာဖွေသူများအတွက် သဘာဝတရားရိပ်သာ
၂) သဘာဝတရားရိပ်သာသည် တရားအားထုတ်သော အလုပ်ကိုသာ အဓိက ထားသည့် ရိပ်သာဖြစ်သော်လည်း
လူမျိုးဘာသာမရွေး ဒုက္ခရောက်နေသူများကို ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေး အစစ အကူအညီပေးနေပါသည်။
၁) ရက်အကန့်အသတ်မရှိ အချိန်ပြည့်ဖွင့်လှစ်သည့်ရိပ်သာဖြစ်ပါသည်။
၃) အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လူတန်းစား ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
၄) ဘ၀ နောက်ဆုံးခရီးထိ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ရိပ်သာမှ အစစအရာရာ တာဝန်ယူပေးပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယူအဆကတော့ မြန်မာတွေဟာ လှူဒါန်းတဲ့နေရာမှာ အင်မတန်ရက်ရော်ကျပါတယ်။ တစ်ခုလိုတာက ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများကို ဘုရား ကျောင်းကန်တွေကြည့်မလှူဘဲ ဘိုးဘွားရိပ်သာ တွေဆောက် လူမှုရေးအသင်တွေထောင် စာသင်ကျောင်းတွေ ဆောက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ခုတော့ ဘုရားတွေဘဲ တည်နေတာ. ဒါတွေက တကယ်သာသနာမတည်ပါဘူး လူသားတွေရဲ့ ရင်မှာ တရားဓမ္မတွေကိန်းအောင်နိုင်မှ သာသနာတည်မှာပါ။
မြန်မာလူမျိုးများဟာ အလှူအတန်း ရက်ရောတယ်လို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ..."အလှူအတန်း ဆိုတာ အဖြူရောင် နှလုံသားက လာတာ လက်နှစ်ဘက်က မဟုတ်ပါဘူး" တဲ့၊
တစ်နေ့တစ်နေ့ လမ်းဘေးတွေမှာ တောင်းစားနေကြတဲ့ အဖိုးအဖွားအရွယ်တွေမြင်ရတိုင်း စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရသလို အိတ်ထဲကပါလာတဲ့ မဖြစ်စလောက်ငွေလေးထဲက တစ်ရာစ နှစ်ရာစ မျိုးကို လူသားချင်စာနာတဲ့စိတ်နဲ့ လှူတန်းပေးကမ်းနေမိပါတယ်။
တကယ်ဆို ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေကို ဘုရား ကျောင်းကန်ဆောက်တာကို နည်းနည်းလျှော့ပီး လူမှုရေးလုပ်ငန်ဘက်ကို ဦးစားပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်လိုက်ပါပြီ။ ။
အဆင်မပြေရင် ဘာလုပ်ပေးသင့်လဲပေါ့.. နီးစပ်ရာဖိုးဖွားရိပ်သာတွေကိုပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ကော..ကုသိုလ်အကျိုး မရရှိပေဘူးလား။ တောင်းစားနေတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုမေးမြန်းပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကူညီကြပါစို့လို့ ကုသိုလ်အကျိုးမျှော် နိုးဆော်အပ်ပါကြောင်း...